हाम्रा साझेदारहरु - Motio
घर9बारेमा9हाम्रो भागीदार
Motio सेवाहरु, प्रशिक्षण, प्रतिष्ठानहरु, र ज्ञान स्थानान्तरण प्रदान गर्ने दुनिया भर मा साझेदारहरु को एक रणनीतिक सेट क्यूरेट गरीएको छ।
एनालिटिक्स विक्रेता द्वारा पार्टनर खोज्नुहोस्
तपाइँको क्षेत्र मा हाम्रो विश्वव्यापी साझेदारहरु मध्ये एक पत्ता लगाउन तपाइँको BI प्लेटफर्म चयन गर्नुहोस्।
Cognos उन्नयन, तैनाती, संस्करण नियन्त्रण र परिवर्तन व्यवस्थापन, परीक्षण र प्रशासन कार्यहरु को स्वचालित, प्रदर्शन मा सुधार, CAP र SAML सक्षम, र नाम स्थान माइग्रेसन/प्रतिस्थापन सहज गर्न को लागी समाधान।
साझेदारहरु पत्ता लगाउनुहोस्
शून्य स्पर्श संस्करण नियन्त्रण, सजिलो तैनाती, लेखा परीक्षा तयार अनुपालन, लेखक सहयोग, र अधिक सहित Qlik भावना को लागी समाधान!
झांकी को लागी समाधान - चाँडै आउँदैछ!
Power BI का लागि समाधानहरू - चाँडै आउँदैछ!
हाम्रो साझेदार नेटवर्क मा सामेल हुनुहोस्